ग'र्भ नर'हने गरि यौ'न सम्प'र्क गर्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए यौ'न सम्प'र्कको लगत्तै १० मिनेट पछी यसो गर्नुहोस - Samudayiknews
April 3, 2020 by user
डा. राजेन्द्र भद्रा म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ। मेरो विवाह भएको तीन वर्ष भयो। सुरुमा सन्तानको चाहना नभए पनि हाल हामीले सन्तान खोजेका छौं, तर हालसम्म मेरो ग’र्भ रहेको छैन। कतै मेरो गर्भ नरहने त होइन ?
मलाई डर लागिरहेको छ। मैले के गर्दा चाँडो गर्भ रहन्छ ?विवाह भएको तीन वर्ष भए पनि श्रीमान्सँगै हुनुहुन्छ वा अलग्गै बस्दै आउनुभएको छ ? पत्रबाट स्पष्ट भएन। तपाइर्ंले सुरुमा सन्तान नचाहेकाले परिवार नियोजनको साधन रोज्नुभयो कि भएन वा कुन साधन प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। समान्यत: श्रीमान्सँगै दुई वर्ष बस्दा वा नियमित (हप्तामा ३ पटक वा त्यसभन्दा बढी) यौ’नसम्पर्क गरेको र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरेको खण्डमा ८० प्रतिसत दम्पतीमा गर्भ रहन्छ। २० प्रतिशतमा
मात्र ग’र्भ नरहने हुनसक्छ। गर्भ नरहनुको कारण महिला, पुरुष वा दुवैमा विद्यमान हुनसक्छ। यो अवस्थामा चिकित्सकसँग भेटेर केही परीक्षण गराउनुपर्ने हुन सक्छ। तपाईंले प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु राम्रो होला। धेरै अवस्थामा सजिलै गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ। तपाइर्ंको उमेर धेरै नभएकाले खासै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन।म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ। मेरो विवाह भएको तीन वर्ष भयो। सुरुमा सन्तानको चाहना नभए पनि हाल हामीले सन्तान खोजेका छौं, तर हालसम्म मेरो गर्भ रहेको छैन। कतै मेरो गर्भ नरहने त होइन ? मलाई डर लागिरहेको छ। मैले के गर्दा चाँडो गर्भ रहन्छ ?
प्रतिसत दम्पतीमा गर्भ रहन्छ। २० प्रतिशतमा मात्र गर्भ नरहने हुनसक्छ। गर्भ नरहनुको कारण महिला, पुरुष वा दुवैमा विद्यमान हुनसक्छ। यो अवस्थामा चिकित्सकसँग भेटेर केही परीक्षण गराउनुपर्ने हुन सक्छ। तपाईंले प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु राम्रो होला। धेरै अवस्थामा सजिलै गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ। तपाइर्ंको उमेर धेरै नभएकाले खासै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन।यही नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अहिले शीघ्र स्खलनको मूल कारण मानसिक नै भएको पाइन्छ। कतिपय मानिसमा यौ नसम्पर्क वा क्रियाकलापमा ‘राम्रो’ गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कारण हुनसक्छ। शीघ्र स्खलन के हो ? किन्सेले गरेका प्रसिद्ध अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषको चरमसुख पाएको देखिएको थियो। शी’घ्र स्खल’नलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा वैज्ञानिकहरूबीच बहस पनि नभएको होइन। ३० सेकेन्डमै वा एक मिनेटभन्दा कम समयमा वा ५ देखि १० धक्कामै वीर्यस्खलन भए छिटो स्खलन भएको भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास भए पनि अहिले आफू तथा
आफ्नो यौ’नजोडीले चाहेको समयभन्दा निरन्तर रूपमा चाँडो वीर्यस्खलन भए त्यसलाई छिटो वी’र्यस्ख’लन भएको स्थिति अर्थात् शीघ्रस्खलन मान्न थालिएको छ। यौ’नसम्प’र्कलाई कति समय लम्ब्याउने भन्ने कुरा यौन जोडीमा भर पर्छ। महिलालाई चरमसुखको स्थितिसम्म पुग्न केही बढी समयलाग्न सक्छ, त्यसैले पुरुषले लिङ्ग प्रवेश गराएर यौ’नस’म्पर्क सुरु गर्नुभन्दा पहिले पर्याप्त मात्रामा पा’क्क्रीडामा संलग्न हुन सके सहयोग पुग्छ। शी’घ्र स्खलन र Performance Anxiety को कुरा प्रायः सबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा शीघ्र वीर्य स्खलन भएको अनुभव गरेका हुन्छन्। घर्षण नै गर्न नपाई वी’र्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो। यसको पक्का कारण यही नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अहिले शीघ्र स्खलनको मूल कारण मानसिक नै भएको पाइन्छ। कतिपय
मानिसमा यौ’नस’म्पर्क वा क्रियाकलापमा ‘राम्रो’ गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कारण हुनसक्छ। आफ्नी श्रीमती वा यौन जोडीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ताले यो समस्यालाई अझ बढाउँछ। विरलै भए पनि केही उकथअजयतचयउष्अ मचगन कतै यस्तो समस्याको कारण त होइन भनेर केलाउन पनि बिर्सनु हुँदैन। आक्कलझुक्कलशीघ्र स्लखन हुँदा चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन। शीघ्र स्खलनको समस्या नियमित रूपमा हुन थाल्यो भनेसमाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो समस्यालाई कम गर्न आफैंले गर्न सकिने केही उपाय छन्, त्यसका बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरौं। यौनसम्पर्क रोक्ने, सुरु गर्नेः यौनसम्पर्क गरिरहँदा स्खलन होलाजस्तो भएपछि तुरुन्तै योनिबाट लिङ्ग बाहिर झिकेर केही बेर यौनक्रीडालाई रो क्ने र उत्तेजना केही कम भए पछि पुनः सुरु गर्ने। आसन परिवर्तन गर्नेः लोग्नेमान्छे माथितिर र महिला तलको सट्टा महिला माथितिर
सक्रिय भै यौ’नसम्पर्क गरे शीघ्रस्खलन कम गर्न मद्दत पुग्छ। लिं’ग अँठयाउनेः स्खलन होलाजस्तो भएपछि तुरुन्तै लिंग बाहिर झिकेर लिङ्गको फेदलाई बेस्सरी अठ्याउने र वीर्य स्खलन हुन नदिने। केही बेरमा उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौ’नक्री’डा सुरु गर्ने। क’न्डम प्रयोग गर्नेः कन्ड’मको प्रयोगबाट पनि कतिपयलाई शीघ्र स्खलनको समस्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ। यस्तो बेलामा चिप्लो पदार्थ कम भएको तथा बाक्लो किसिमको कन्डमले बढी फाइदा पुर्‍याउँछ। मांसपेशीको प्रयोग गर्नेः पिसाब आउँदा रोक्न प्रयोग गर्ने मांसपेशीको कसरत गरेर वीर्य स्खलनलाई रोक्ने अभ्यास गर्न सके पनि फाइदा पुग्छ। वीर्य स्खलन नियन्त्रणको अभ्यासः दीर्घकालीन उपचारका लागि यो सहयोगी हुनसक्छ। हस्तमैथुन गर्ने र वीर्य स्खलन होलाजस्तो भएपछि रो क्ने र उत्तेजना केही कम
भएपछि पुनः हस्तमैथुन सुरु गर्ने, फेरि वीर्य स्खलन होलाजस्तो भएपछि रोक्ने र यो प्रक्रिया दोहोर्‍याउने। वीर्य स्खलनलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लागेपछि आफ्नो यौन साथीसँग यौ’नस’म्पर्करहित यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुने तर यौ नसम्पर्क भने नगर्ने। वीर्य स्खलन होलाजस्तो भएपछि क्रियाकलाप रोक्ने र उत्ते’जना केही कम भएपछि पुनः सुरु गर्ने। आफ्नो यौन साथीसँग पहिले कुनै चिप्लो पदार्थ प्रयोग नगरी र पछि चिप्लो पदार्थ प्रयोग गरेर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुने। अब वीर्य स्खलनमा पर्याप्त नियन्त्रण भयो जस्तो लागेपछि लिङ्गलाई बिस्तारै भगक्षेत्र -योनिक्षेत्र) मा स्पर्श वा हल्का घर्षण गर्ने तर यौन सम्पर्क
भने नगर्ने। वीर्य स्खलन होलाजस्तो भए उक्त क्रियाकलाप गर्न रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः सुरु गर्ने। वीर्य स्खलनलाई पर्याप्त नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लागेपछि माथि भनिएजस्तै पहिले श्रीमती बढी सक्रिय हुने गरी यौनसम्पर्क सुरु गर्ने। अनि वीर्य स्खलनको नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति वा क्षमता हेर्दै विविध उपाय अवलम्बन गर्दै यौनसम्पर्कलाई अघि बढाउने। समय र धैर्यता निकै लाग्ने भए पनि वीर्य स्खलन नियन्त्रणमा यी अभ्यास निकै लाभदायक हुन सक्छन् र यसमा पुरुषलाई यौ’न साथीको पर्याप्त सहयोग पनि चाहिन्छ।
Prevखाडीमा पसिना बगाउने श्रीमति अर्कैको अँगालोमा मस्ती गर्ने !
Nextबसमा यात्रा गरेकी युवतीलाई जव पुरुषले गरे यस्तो हर्कत, त्यसपछि युवतीले जे गरिन्… त्यसले सबैको मन जित्यो !